Teknolojiyada | TeraNews.net |
Taageere Wireless-ka cusub ee Xiaomi Mijia
Analooga Internetka moobaylka, oo ah qaab terminalka baabuurta, ayaa waxaa xayeysiineysa Starlink. Adeegga "Portability" wuxuu ku jihaysan yahay...
Marka la eego in 3D Movie Maker la sameeyay 1995, warku waa sidaas-si. Waxaa jira hal daqiiqo oo kaliya. Dhammaan 26-kan sano, ma jiro…
Waxaad ka iibsan kartaa fiilada USB Type-C 2.1 dukaamada gaarka ah
Heerka USB Type-C 2.1 weli wuu ahaan doonaa. Tiknoolajiyada shatiga leh ee 2019 waxay heshay hirgelin macquul ah. Inkastoo qaar badan…
USB Type-C waa halbeegga lagu dallaco agabka 2022
Komishanka Yurub ayaa ansixiyay halbeeg cusub oo suuqa IT ah. Waxay khusaysaa nooca xidhiidhiyaha ee ku dallacaadda qalabka mobilada. Qaab…
VPN - waa maxay, faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Ku habboonaanta adeegga VPN ayaa kordhay 2022 ilaa heer ay tahay wax aan suurtagal ahayn in la iska indhatiro mawduucan. Isticmaalayaashu waxay arkaan...
Canon EOS R, Rp iyo M50 Mark II kamaradaha muraayadaha aan lahayn ee 2022
Suuqa qalabka sawir-qaadista ee xirfadlayaasha ah ayaa lagu buuxin doonaa saddex badeeco oo cusub oo ka yimid astaanta Japan ee Canon. Laga bilaabo 2021, soo saaraha…
Dhaqida faakuumka nadiifiyaha UWANT B100-E - wasakh nadiifiyaha ugu fiican
Dhaqida nadiifiyaha vacuum-ka cidna lama yaabayo. Ku dhawaad ​​qalab kasta oo ilbiriqsi kasta oo suuqa yaala ee qalabka guriga ee lagu nadiifiyo waxa uu leeyahay shaqo...
Metaverse - waa maxay, sida loo helo, maxaa gaar ah
Metaverse-ku waa xaqiiqo dhab ah oo ay dadku ku wada falgalaan midba midka kale ama walxaha,…
Ciyaartoyga duubista tooska ah ee Pro-Ject Automat A1
Pro-Ject Automat A1 waa qayb ka mid ah khad cusub oo heer gelitaan toos ah. Waxa uu ujeedkiisu yahay...
Beyerdynamic DT 700 PRO X - Sameecado dhegaha-korka ah
Muuqaalka ugu muhiimsan ee khadka cusub ee dhegaha-dhegaha DT PRO X oo buuxa waa STELLAR.45 dhawaaqa dhawaaqa. Ma fududa…
Marantz ND8006 waxay ku salaysan tahay adeegsiga horumarinta aaladaha taxanaha ah ee qaaliga ah. Isku xidha shabakad tayo sare leh...
Soundbar JBL shineemo SB190
Shaleemada JBL SB190 dhawaaqa dhawaaqa waa wakiilka qaybta qiimaha dhexe iyo kan ugu sarreeya ee khadka SB. Muuqaalka ugu muhiimsan ee shineemo JBL SB190…
Cod-weyneeye isteeriyo isku dhafan Rotel RA-1592MKII
Rotel RA-1592MKII waa qaabka ugu sarreeya ee kala duwan ee 15MKII, isagoo keenaya 200W (8Ω) kanaalkii fasalka AB. Loo tixgeliyey cod-weyneeye...
1 2 3 ... 16 ku xiga
Baabuur koronto oo is haysta 2022
Taleefanka casriga ah Infinix Zero X Pro - xeelad suuqgeyn oo Shiinees ah
Maalinta Hooyada (fasaxa) - waxa la siinayo
Sony 4K iyo 8K TV-yada - waa bilow fiican sanadka 2021
Rose Hanbury: xanta ku saabsan rabshadaha boqortooyada ee qalbiga Yurub
TV-BOX X88 PRO 20 (RK3566) - dulmar guud, qeexitaanno